China Blue Corrugated xaashida saqafka sare ee Gi- saqafka hore ee warshadda Afrcia iyo soosaarayaasha |Zhanzhi
Midabka dahaarka leh ee dahaarka leh ee GI steel xaashida saqafka waxaa lagu sameeyay xaashi bir ppgi ah oo leh rullaluistemadka saxaafadda iyo qabow laabashada xaashida hirarka kala duwan.Waxay ku habboon tahay dhismayaasha warshadaha iyo madaniga ah, bakhaarada, dhismayaal gaar ah, saqafyada qaab dhismeedka birta waaweyn -span, derbiga iyo qurxinta dibadda ee guriga, iwm. xoog sare, midab qani ah iyo dhalaal, dhismo ku habboon, dhulgariir, ka hortagga dabka, biyuhu, cimri dheer iyo dayactir lacag la'aan ah, iwm.
2.Grade: DX51d, G550, iwm oo dhan sida ku xusan codsiga macmiilka
3.Color: midabka RAL, ama sida looga baahan yahay macaamiisha
4. Dhumucdiisuna: 0.12mmmm, dhammaan la heli karo
7.zinc daahan: 40-175gsm
9. *Waxyaabaha ceeriin 762mm ilaa 665mm (ka dib jiingado) iyo 9 hirar;
*Waxyaabaha ceeriin 914mm ilaa 800mm-890mm (kadib jiingado) iyo 11 hirar;
*Waxyaabaha ceeriin 1000mm ilaa 900mm ama 920mm (kadib jiingado) iyo 12 ama 14 mowjadaha;
*Waxyaabaha ceeriin 1200mm ilaa 1070mm (kadib jiingado) iyo 17 mowjadaha ayaa sidoo kale soo saari kara sida looga baahan yahay macaamiisha
Jiingado prepainted gi birta saqafka xaashida waxay leedahay sifooyinka miisaanka fudud, xoog sare, midabka qani, ku habboon oo dhismo degdeg ah, iska caabin dhulgariir, ka hortagga dabka, ilaalinta roobka, nolosha dheer iyo dayactirka-free iwm, oo si weyn loo faafiyey oo lagu dabaqay.
(1) Qaab qurux badan oo cusub, midabyo qani ah, qurxinta xooggan iyo isku-dhafka dabacsan, kuwaas oo muujin kara qaabab kala duwan oo naqshadeed;
(2) Miisaan yar oo dhintay, xoog sare, qalafsanaan maqaarka oo wanaagsan, iyo waxqabadka seismic ee wanaagsan ee wakiilka biyuhu;
(3) tayada sare ee alaabta warshadda;
(4) Dhisme iyo rakibid ku habboon, yaraynta culayska shaqada ee rakibidda iyo gaadiidka iyo soo gaabinaysa muddada dhismaha;
(5) xaashida birta ah ee astaanta u ah waa shay dhisme ku habboon deegaanka, oo dib loo warshadayn karo.Caannimada iyo adeegsiga xaashida birta ah ee astaanta u ah waxay waafaqsan tahay siyaasadda horumarinta waarta ee dhaqaalaha qaranka;
(6) Alaabta monomerka ah waa qaali waxayna leeyihiin adkeysi liidata marka la barbar dhigo kuwa shubka ah ama kuwa xayndaabka ah.
Waraaqaha saqafka ah ee birta ah ee loo yaqaan 'galvanized' ee saqafka ah ayaa ku habboon dhismayaasha warshadaha iyo madaniga ah, bakhaarada, dhismayaal gaar ah, saqafyada, derbiyada iyo qurxinta derbiga gudaha iyo dibadda ee guryaha qaab dhismeedka birta ballaaran, iwm.